Goorma ayaa la furi doonaa Sabiha Gökçen Runway Airport? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGoorma ayaa la furi doonaa Sabiha Gökçen Runway Airport?
06 / 02 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, VIDEO
sabiha gokcen garoonka diyaaradaha ee heerka labaad
Wadada labaad ee laamiga ah, oo laga bilaabay in laga dhiso garoonka diyaaradaha Sabiha Gökçen sanadki 2015, ayaa la qorsheynayaa in la hawl galiyo dhamaadka 2020.
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Sabiha Gökçen, garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul, dhismaha wadada labaad ee laamiga ah, oo loo dhisay barbar socota tareenka hore u jiray, ayaa dhererkiisu ahaa 3 mitir. Dhismaha marinnada hoose, oo ka mid ah meelihii ugu muhiimsanaa ee dariiqa labaad ayaa la dhammeystirey. Shaqooyinka buuxinta wadada labaad iyo taxiways, oo laga dhex dhisay heerka baaxadda labaad ayaa shaqeynaya. Intaa ka dib, waxay ku sii socon doontaa shaqooyinka suufiga ah haddii aan dib-u-dhac lahayn, dariiqa labaad wuxuu si buuxda u shaqeynayaa dhamaadka 500. 2020 boqolkiiba wejiga koowaad ee Sabiha Gökçen Airport Runway ayaa la soo gabagabeeyey wejiga labaadna wuxuu gaadhay 98 boqolkiiba.
Gegada Sabiha Gökçen Airport, wadada labaad ee laamiga ayaa la adeegsan doonaa dhamaadka sanadka dhamaana wadooyinka jira ayaa dayactir lagu sameyn doonaa. Marka la dhammaystiro dayactirka jidkii hore ee jira, laba marin oo isku mid ah ayaa isku mar la adeegsan doonaa, isla markaana saacaddii soo degidda iyo ka soo kicinta ayaa laba jibaari doonta garoonka Sabiha Gökçen.
Airport Sabiha Gökçen hoos shaqada runway labaad, 30 million mitir cubic dhagaxa buuxiyo daloolka ay keentay kala duwanaanshaha u quruxsan ee ku ordaana jira, 2 million 750 kun oo mitir kuubo oo burbura ka dheregtaan dhagax, 1 million 650 kun oo mitir murabac oo la taaban karo daciif ah, in la qabto 1 million 800 kun oo mitir murabac oo la taaban karo adag.
Dhererka wadada labaad ee wadada labaad waxay noqon doontaa mitirka 3 kun mitir 500. Sidoo kale 3 taxiway labaad isku midka ah ee soo socota si ay ku ordaana, xidhiidh taxiway ah, taxiway xawaaraha sare 10, 1 dufan dhexe, dufan iyo xamuulka 1 1 imtixaanka engine dufan doono.
YAA LABAAD RUWAY LABAAD
Qandaraaska labaad ee Wadada Sabiha Gökçen ee duulimaadka labaad, oo aan lagu bilaabi karin dhibaatooyin la xiriira duulista, ayaa la sameeyay waxaana Makyol uu ku guuleystey qandaraaskii ay ka heleen 9 shirkadood. Makyol, oo gudbiyay dalab 17 boqolkiiba ka hooseeya qiimaha qandaraaska, ayaa milkiilaha qandaraaska ku lahaa $ 1.397 bilyan.
Duulimaadkii labaad ee furitaanka garoonka diyaaradaha Sabiha Gökçen
3. 2 garoonka diyaaradaha. dhisidda baaskiil aan la bilaabin
Sabiha Gökçen Airport-ka labaad wuu shaqeeyaa
Sabiha Gökçen Airport-ka labaad ee qandaraaska